वरिष्ठ वातावरण इन्जिनियर शाक्यको निधन – EngineerKhabar
By इन्जिनियर खबर	 On २० बैशाख २०७८, सोमबार २०:५७
काठमाडौँ – नेपालको वातावरणीय क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने वातावरणविद् ई. सूर्यमान शाक्यको निधन भएको छ । ६५ वर्षीय शाक्यको सोमबार बिहान उपचारको क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको हो ।
वातावरण इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर सकेर ई. शाक्य १९८७ मा न्यूयोर्क बाट काठमाडौं आइपुगेका थिए । करिब ७ बर्षको अमेरिका बसाईपश्चात उनि संग दुईवटा बिकल्प थियो, १५०० अमेरिकन डलर तिरेर ग्रिन कार्ड लिने वा नेपाल फर्कने !!! सात दिन लामो भ्याकेसन पश्चात रास्ट्रीयता परिवर्तन गर्नु भन्दा नेपाल नै फर्केर सेवा गर्ने उत्तम बिकल्प देख्दै ई. शाक्य दम्पति नेपाल फर्किएका थिए ।
धेरै सपना, आकांक्षा बोकेर नेपाल फर्किएका ई शाक्य त्यसपछि जागिरको खोजिमा लागे । त्यति बेलाको समयमा धेरै तिर घुमेर बुझ्दै गर्दा नेपालमा वातावरण इन्जिनियरिंग बारे कसैलाई चासो नै नरहेको र आवश्यकता नै नभएको जस्तो व्यवहारिक रुपमा देख्न पाए । अचम्म को कुरा त त्यस बेला यो बिषय बारे जानकार मान्छे नै थिएनन । समाजमा इन्जिनियर भनेको सिभिल, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल मात्र भन्ने बुझिन्थ्यो । उनि सबै तिर बुझ्न जान्थे, तर निराशा बाहेक केहि हात पर्दैनथ्यो । उनले सो दौरानमा करिब १० बर्षको जीवन स्वर्णिम समय त्यहि खोजमै बिताएका थिए ।
ई. शाक्यको अनुभव उनकै आफ्नै आवाजबाट यहाँ हेर्नुहोस
सबै तिर यस्तो अवस्था देखेर वाक्क भई ई. शाक्यले एकदिन आफ्नो कोठामा बस्दै शब्दकोश पल्टाए र त्यसमा वातावरणको शाब्दिक अर्थ खोज्न थाले । एकदमै अच्चमको कुरा त सो शब्दकोषमा “इन्भाइरोन्” नामको शब्द मात्र थियो, जुन बिषय “इन्भाइरोन्मेन्ट” मा उनले स्नातकोतर गरे त्यसको त शब्द नै थिएन सो शब्दकोशमा । उनले अर्को शब्दकोश पनि खोजन थाले र बल्ल सो शब्दकोशमा “इन्भाइरोन्मेन्ट” को अर्थ “सेरोफेरो”, “जग्गा”, “परिस्थिति” पाए । यति सबै हुदा समेत उनले हार भने मानेनन् बरु नेपालमा नै केहि गर्ने दृढ संकल्प लिए ।
नेपालमा वातावरण इन्जिनियरको सो अवस्थाबाट आजको दिनसम्म नियालेर हेर्दा, नेपालका पहिलो वातावरण इन्जनियर शाक्यले वातावरणीय क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको देख्न सकिन्छ । नेपालको पर्यावरणीय क्षेत्रमा कुनै कानुन नभएको महसुस भएपछी उनले त्यसका लागि लामो संघर्ष गरे । ई.पी.ए (इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट) र इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन रेगुलसन ड्राफ्टको दौरानमा समेत ई शाक्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । ई. शाक्यले वातावरण संरक्षण परिषद्को सदस्य सचिव, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा महानिर्देशक भएर काम गरेका थिए । त्यस्तै, ई. शाक्यले विभिन्न हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरुमा वातावरण इन्जिनियरको रुपमा युनिट प्रमुख भएर कामसमेत गरेका छन् । उनका थुप्रै, अध्ययन, अनुसन्धानहरु विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित छन् ।